Mitoera tsara sy tohizo hatrany ny finoana. Tsara kokoa ny zavatra mialoha. - Anony - Quote Pedia
Ny mandroso miatrika ny fitsapana dia mety ho sarotra, nefa olona mahavita mandresy ny tahotra azy ary mandroso dia ireo izay mivoaka mahomby. Mila manana saina mazava ianao rehefa misy fifangaroana.
Mila mijoro ho an'ny tenanao sy ny maro hafa izay mila ny fanampianao koa ianao. Hisy fanamby aminao aminao ny fiainana. Tsy azo ihodivirana nefa ny manamboatra voasarimakirana rehefa manome aina ny loko ny fiainana dia izay manampy anao hivoaka avy amin'ny olana. Io dia angovo avy amin'ny angovo tsara ary antenaina fa hisy zavatra tsara.
Mila mino ny tenanao ianao ary mahatakatra fa hahita ny hery hiadiana amin'ny ho avy tsy ho avy ianao. Ianao dia ho mpiady sy hanome aingam-panahy ny hafa koa. Miaraka isika, ny fanantenana dia hanampy antsika handroso ho fiaraha-monina.
Na eo amin'ny fiainanao manokana aza, na inona na inona tafio-drivotra tonga amin'izay alehanao, dia fantaro fa 'izao no hiseho'. Mila mitazona ny fahavononanao sy ny fahatoniana fotsiny ianao ary mizaha eo aloha. Saintsaino foana fa misy zavatra tsara atsy ho atsy ary mahazo fanantenana avy amin'izany eritreritra izany.
Miezaha manodidina ny olona tsara sy ireo manana lamosinao rehefa miharatsy. Vakio ny boky avy amin'ny mpanoratra izay pragmatika ary manampy anao hiatrika ny hevitrao. Hanampy ny herinao izany ary hanampy anao hibanjina ny fiainana.
Ny fijanonana tsara dia manome fanantenana ary manome hery anao hanesorana ny fetranao. Mampihena ny tahotrao ary mamela anao manandrana safidy mety hampiala anao amin'ny toe-javatra. Io no farany mitondra amin'ny vahaolana ary mandresy isika handresy ny sarotra, mandroso mialoha amin'ny fiainana.
Minoa amin'ny tenanao
Mino Teny sy Teny lazaina
Fahazoana loha hevitra
Ataovy hatrany ny Quotes finoana
Jereo etsy aloha
Teny fohy eritreritra
Mijanona amin'ny fomba tsara
Miadana. Mahereza. Aza avela hisy handripaka anao. - Anonyme
Miadana. Mahereza. Aza avela hisy handripaka anao. - Teny nindramina tsy fantatra anarana:
Tiavo foana ny namanao avy ao am-ponao fa tsy avy amin'ny toe-ponao na ilainao. - Anonyme
Ny sakaiza dia olona tsy manana fifandraisantsika ra, fa ny fifamatorana dia miankina amin'ny tsirairay ...
Maty amin'ny fahatsiarovana fa tsy nofy. - Anonyme
Tena niaina tokoa ny fiainana rehefa misy olona manatsara ny andro tsirairay. Zava-dehibe ny ataontsika…